HTC बिक्री मा सुधार गर्न को लागी जारी छ, तर धेरै थोरै थोरै | Androidsis
HTC एक महत्वपूर्ण मोड़मा छ। ताइवानको कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको बिक्रीमा भारी गिरावट देखेको छ, जस्तै हालको वित्तीय रिपोर्टहरु देखाइएको छ। अक्टोबरमा उनीहरुले एउटा रिपोर्ट देखाए जुन पहिलो हरीयो अंकुर देखाईएको थियो। र यस्तो लाग्छ कि उनीहरु नोभेम्बर मा दोहोर्याए।
र यो हो कि नोभेम्बर महिना को लागी एक नयाँ वित्तीय रिपोर्ट देखाउँछ कि बिक्री अघिल्लो महिना को तुलना मा थोरै सुधार भएको छ। निस्सन्देह, त्यहाँ फ्लाई मा घण्टी फ्याक्न को लागी कुनै आवश्यकता छैन, जस्तै, मैले तपाइँलाई भनेको छु, HTC को वित्तीय स्थिति साँच्चै खराब छ।
HTC को नयाँ वित्तीय रिपोर्ट HTC एक A9 को बिक्री को लागी कम्पनी को बिक्री सुधार धन्यवाद देखाउँछ
तर कसरी पाउनुभयो HTC आर्थिक सर्तहरु मा मुनाफा को बाटो मा फर्किनेछ? रहस्य यसको नयाँ एचटीसी वन ए in मा निहित छ, एक फोन जुन यसको धेरै मूल्य को बावजुद धेरै राम्रो बिक्री गरीरहेको छ। पक्कै धेरै ग्राहकहरु प्रारम्भिक छुट कि नयाँ HTC स्मार्टफोन संयुक्त राज्य अमेरिका मा बेच्न को लागी प्राप्त लाभ उठाएका छन्।
ठ्याक्कै बिक्री अक्टोबरको तुलनामा १४.14.96%% सुधार भएको छ, राजस्व 314.32 मिलियन अमेरिकी डलर को आंकडा पुग्यो। तर जसरी म भन्दै थिएँ, चीजहरु अझै पनी नराम्रो देखिन्छन्।
र यो यो हो कि यदि हामी नोभेम्बर २०१५ को महीनाको बखत गत बर्ष २०१४ को उही अवधिको तुलनामा तुलना गर्छौं, चीजहरु धेरै परिवर्तन हुन्छन्: एचटीसी ३। .२५% को गिरावट भोग्नु परेको छ जसको अर्थ लगभग ३५०० मिलियन अमेरिकी डलर गुमाउनु हो। लगभग केहि छैन। हो, म धेरै माफी चाहन्छु, तर उनीहरुसँग उनीहरु के योग्य छन्।
व्यक्तिगत रूपमा म एक ब्रान्ड को रूप मा htc माया गर्छु। मेरो वर्तमान फोन HTC एक M7, एक उपकरण हो कि अझै पनी उपयोग को दुई बर्ष भन्दा बढी पछि मेरो लागी बिल्कुल काम गर्दछ। तर ताइवानी निर्माता आफैंलाई पुन: आविष्कार गर्न असफल भएको छ। निम्न पुस्ताहरु पहिलो मोडेल को तुलना मा डिजाइन मा पत्ता लगाईयो र अर्कातर्फ हामी मूल्य छ।
HTC एक साँच्चै खराब मूल्य निर्धारण नीति पछ्याएको छ। एक तर्फ हामी अपमानजनक मूल्यहरु मा आफ्नो उच्च दायरा छ। कसले एक HTC फ्ल्यागशिप किन्न जाँदैछ जब यो यसको प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा औसत मा लगभग १०० यूरो बढी खर्च हुन्छ? र त्यसपछि त्यहाँ मध्य-दायरा को मुद्दा हो, जुन मेरो विचार मा सबैभन्दा धेरै रक्तस्राव छ। समस्या यो छ कि ताइवानी विशाल आफ्नो उच्च मध्य मूल्यहरु मा मध्य दूरी बेचिन्छ। र प्राविधिक रूप मा तपाइँ धेरै सस्ता समाधान र एकै वा अझ राम्रो सुविधाहरु संग पाउन सक्नुहुन्छ।
Eमलाई आशा छ HTC ले उनीहरुको स्थिति सुधार गर्दछ र हामी एक पटक फेरी HTC इच्छा, सनसनी वा HTC M7 को रूप मा उत्कृष्ट कृतिहरु को आनन्द उठाउन सक्छौं। र तपाइँ, तपाइँ के सोच्नुहुन्छ? के तपाइँ HTC समय मा फिर्ता उडान गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने लाग्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » HTC » HTC ले बिक्री सुधार गर्न जारी राख्छ, तर थोरै थोरैमा